बिहेपछिको जीवन कसरी खुसी र मजबुत बनाउने ? जान्नुहोस् - pnpkhabar.com
You are at:Home»स्वास्थ्य/जीवनशैली»बिहेपछिको जीवन कसरी खुसी र मजबुत बनाउने ? जान्नुहोस्
बिहेपछिको जीवन कसरी खुसी र मजबुत बनाउने ? जान्नुहोस्
By रिता घिसिंग on १५ पुष २०७४, शनिबार ०४:०४ स्वास्थ्य/जीवनशैली
बिहेपछिको जीवन कसरी खुसी र मजबुत बनाउने त ? एक सामग्री :
-जिम्मेवारी निर्वाहले मात्र विवाहको गरिमालाई बचाइराख्दैन । त्यसैले, घुम्न जाने, सप्र्राइज पार्टी दिने वा आफ्नो पार्टनरलाई जे मन पर्छ, त्यस्ता गतिविधि
गर्दा सम्बन्ध अझ मजबुत बन्दै जान्छ ।